Dhakhaatiirta Waqooyiga Iswiidhan oo diiday gudniinka wiilasha. | Somaliska
Dhakhaatiirta waqooyiga Iswiidhan ayaa diiday in ay sameeyaan gudniinka wiilasha ayagoo ogolaansho ka heysta maamulka. Gobolka Västra Götaland ayaa waxaa ku waajiba in uu adeeg caafimaad siiyo ilaa 300 oo qoys oo isugu jira Muslimiin iyo Yuhuud, Sida lagu soo xigtay wargeys goboleedka Göteborgs-Posten (GP). "Hada waa in aan banaanka aadnaa oo aan raadinaa qof hawsha qabanaya, waayo dhakhaatiirtu way diideen hawshaan. Waan xushmeyneynaa go'aanka dhakhaatiirta" ayuu yiri Lars-Göran Moberg oo ah madaxa gudiga caafimaadka. Dhakhtarka xaga Qaliinka John Westfelt ma arko in ay macquul tahay in dhakhaatiirtu ay hawshaan qabtaan. "Waxaan muhiimada ka saarney dhowr hawlood oo kale si aan u caawino caruurta jiran, sida Qaliinyo lagu sameeyo makhaarka qafiifka ah u jeedooyin caafimaad dartood, Sida iska cadna hawshaan gudniinka ma qaban karno in aan hawlo kale dayacno mooyee" Ayuu yiri John Westfelt. Waxaa qorey wargeyska The Local.
Dhakhaatiirta waqooyiga Iswiidhan ayaa diiday in ay sameeyaan gudniinka wiilasha ayagoo ogolaansho ka heysta maamulka.
Gobolka Västra Götaland ayaa waxaa ku waajiba in uu adeeg caafimaad siiyo ilaa 300 oo qoys oo isugu jira Muslimiin iyo Yuhuud, Sida lagu soo xigtay wargeys goboleedka Göteborgs-Posten (GP).
“Hada waa in aan banaanka aadnaa oo aan raadinaa qof hawsha qabanaya, waayo dhakhaatiirtu way diideen hawshaan. Waan xushmeyneynaa go’aanka dhakhaatiirta” ayuu yiri Lars-Göran Moberg oo ah madaxa gudiga caafimaadka.
Dhakhtarka xaga Qaliinka John Westfelt ma arko in ay macquul tahay in dhakhaatiirtu ay hawshaan qabtaan.
“Waxaan muhiimada ka saarney dhowr hawlood oo kale si aan u caawino caruurta jiran, sida Qaliinyo lagu sameeyo makhaarka qafiifka ah u jeedooyin caafimaad dartood, Sida iska cadna hawshaan gudniinka ma qaban karno in aan hawlo kale dayacno mooyee” Ayuu yiri John Westfelt.
Waxaa qorey wargeyska The Local.
Qoys soomaali ah oo loo hanjabay